ရန်ကုန်ရဲ့ မွန်းကြပ်မှုက ဝေးလွင့်ရာ လမ်း ၅၀ ကဖေး | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| January 10, 2013 | Hits:6,849
| | အပူငွေ့များ၊ အကြော်ညှော်နံ့များ၊ ဆူညံသံများနဲ့ ညစ်ညူးစရာ ရန်ကုန်မြို့လည်ရဲ့ အတွေ့အထိကို တွေ့ကြုံ ခံစားကြရ မှာပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေရဲ့ အဝေး ခဏတာလေး ဖြစ်ဖြစ် ဇိမ်ကျကျ အေးမြမြ လွတ်မြောက် နေရာလေး တခုကတော့ 50th Street လို့ ဘိုလိုခေါ်တဲ့ လမ်း ၅၀ ထဲက ကဖေးနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပါ။
လမ်း ၅၀ ကဖေး နှင့် စားသောက်ဆိုင် ဆိုတာ မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်မှာ အနည်းငယ်သာ ရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးပါ စားသောက်ဆိုင်တွေ ထဲက တခုပါ။ မြို့လည်ခေါင် လူစည်ကား ရှုပ်ထွေးတဲ့ နေရာရဲ့ အဝေး လမ်း ၅၀ အောက်ဘလောက်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဒီ စားသောက်ဆိုင်ဟာ မွန်းကြပ်စရာ ရန်ကုန် ကန်ထရိုက် တိုက်ခန်းတွေလို မဟုတ် ကျယ်ဝန်းချောင်ချိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်မျိုးကို ပေးတဲ့ အဆောက်အဦ အတွင်းပိုင်း တည်ဆောက်မှုနဲ့ပါ။ အုတ်ချပ်တွေ စီထားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ နံရံတွေကို ကာရံထားပြီး အထပ်နှစ်ထပ် ထားရှိပါတယ်။ နှစ်ထပ်စလုံးမှာ အားကစား အစီအစဉ်တွေ အချိန်မရွေး ကြည့်ရှုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့အပြင် ဖော်ရွေခင်မင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဇိမ်ကျကျနားနေနိုင်တဲ့ နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့ အချိန်မရွေး မှာယူ သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ စားစရာတွေ ပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်ကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သံတမန်တွေ၊ NGO မှ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာတော့ ဒီ လမ်း ၅၀ ကဖေးဟာ တကယ့်ကို ကျေနပ်စရာလို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ ဆိုင်ကလေးမှာ အိမ်လွမ်းသူတွေ စုပြီး ပျော်မောဖွဲ့ဖို့ အလွမ်းပြေ တွေ့ဆုံ စားသောက်တာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ကြ သလို မိမိ နှစ်သက်ရာ အစားအသောက်ကိုလည်း မှာယူ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တော့ အနောက်တိုင်း စတိုင် ဟမ်ဘာဂါ၊ အသားအစာသွတ်မုန့်၊ သို့မဟုတ် ပီဇာကျွတ်ကျွတ် သို့မဟုတ် အလားတူ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ မုန့်အမျိုးမျိုးလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ စမူဆာကတော့ ထူးရှယ်ပါပဲ။
အဆောက်အဦးရဲ့ အနေအထားနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ အဲဒီ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦးကို ဗြိတိန်က မှာယူ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ အုတ်နဲ့ မြန်မာပြည်က အကောင်းဆုံး ကျွန်းသစ်တွေ အသုံးပြုပြီး ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ မူလတုန်း ကတော့ ကုန်သည်တွေ ခေတ္တတည်းခိုရာပါ။ နောက်တော့ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဌာနနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဒီနေရာနဲ့ အနီးနား လမ်းကျဉ်းတွေကိုပါ သိမ်းယူခံရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဟာ ကမ်ဘောဒီးယားမှာလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ စီးပွားရေးသမားတဦးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီဆိုင်ကို စဖွင့်တုန်းက နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားလုပ်ငန်း အခုလို အဆင်မပြေသေးတာကြောင့် အရှုံးပေါ်ပြီး အစုရှယ်ယာရှင်တွေ လုပ်ငန်းက ထွက်ကုန်ကြသတဲ့။ သူ တယောက်တည်း ကြံ့ကြံ့ခံရပ်ခဲ့တာ အခုအခါမှာတော့ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်တွေ ဖူးပွင့်တာ နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဧည့်သည်တွေက သက်သေပါ။
ဆိုင်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ခဲ့တာပါ။ အဆောက်အဦးရဲ့ အောက်ထပ်က ယမကာခန်း၊ သီးသန့် နံရံတွင်းအခန်းများ၊ ဘိလိယက်ခုံနဲ့ အားကစား လိုင်းပေါင်းစုံ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ တီဗွီ၊ ပန်းပုလက်ရာများနဲ့ သဘာဝ ရသကို ခံစားရစေပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး ကတော့ စားသောက်ဖွယ်ရာ အမယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ပြီး၊ အနောက်တိုင်း အစားအစာ အမျိုးမျိုးကို မှာယူ စားသုံးနိုင်သလို မြန်မာ့အစားအစာ ကိုလည်း စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ဖြစ်တဲ့ အရွက်သုပ်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် စတာတွေ အပြင် သောက်စရာ ဖျော်ရည်အမျိုးမျိုးရနိုင်တဲ့အပြင် တခြားနိုင်ငံက တင်သွင်းတဲ့ အသားဗူး အပါအ၀င် အခြား စိတ်ကူးရာရာ အသီး အရွက် ဟင်း အမယ်တွေ မှာယူ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင် အပေါ်ထပ်ကို တက်ဖို့ ကြောင်လိန်လှေခါးကလည်း ခန့်ငြားတောက်ပြောင် လှပါတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာလည်း ယမကာ ခန်းနဲ့ စားသောက်ခန်းရှိနေပါသေးတယ်။ ယမကာ မျိုးစုံနဲ့ ကော့တေးလ် ကို စီစဉ်ပေးထား ပါတယ်။ ပြီးတော့ Wingaba Bloody Mary လို ထင်ရှားတဲ့ အရက်တွေ ပါဝင်သလို လက်ဖြစ် ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်လည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ၀ိုင်အရက်တွေကို ကြည့်ဦးမလား။ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် ၀ိုင်မျိုးစုံ ရနိုင်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်က ထုတ်တဲ့ Red Mountain Estate လည်း အခါအားလျော်စွာ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ထပ်ဆင့် ပြောရရင်တော့ ပြန်တွင်း ပြည်ပက ထင်ရှားတဲ့ ဘီယာမျိုးစုံ ရယူ သုံးဆောင်နိုင်သလို တကယ့်ကော်ဖီစစ်စစ် အရသာကိုလည်း တချိန်တည်းမှာ ရနိုင်ပြန်ပါတယ်။ ညပိုင်း ရောက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ မြူးမြူကြွကြွ ရန်ကုန် လူငယ်လူရွယ်တွေကို တွေ့မြင်ရဦးမှာပါ။
လမ်း ၅၀ စားသောက်ဆိုင်ဟာ စိတ်ပန်း လူပန်း ဖြစ်နေတာကို စိတ်လန်း လူလန်းဖြစ်ဖို့ အဆင့်မြင့်ကြိုဆို ဖော်ရွေမှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်လာကိုပဲ သုံးသုံး၊ မြန်မာငွေကြေးပဲ သုံးသုံး မိမိအဆင်ပြေရာ ငွေကြေးသုံးစွဲ ပေးချေနိုင်တာကလည်း အားသာချက် ဖြစ်တဲ့ အပြင် အခမဲ့ အင်တာနက် ၀ိုင်ဖိုင် သုံးစွဲနိုင်တာတွေ၊ တနင်္ဂနွေ တရက်လုံး ပျော်စရာ အစီအစဉ်တွေ ရှိပြန်သေးပါတယ်။ ကဲ … လမ်း ၅၀ ကဖေးဆိုင်ကို သွားဖို့အတွက် စိတ်ပြောင်းသွားရင်တော့ အိပ်ဖောင်းဖို့တော့ လိုတယ်နော။
( Steve Tickner ၏ 50th Street Cafe: Escaping the Madding Crowd ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ရဲနည် ဖြည့်စွက်ရေးသား တည်းဖြတ်သည်)
“တန်ဖိုးနည်း” အိမ်ရာ အခြေခံ လူတန်းစားအတွက် ဈေးအလွန်ကြီးဟု ဆိုရခိုင်ဘက်မှ မွတ်စလင်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးနေကျပ် တသိန်းဝန်းကျင် ဆင်းမ်ကတ်များ သုံးနိုင်တော့မည်ဈေးရောင်းပွဲ အစီအစဉ် အားနည်းချက် လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင် တောင်းပန်ကွမ်းယာကောင်းကောင်း နေပြည်တော်မှာ ၂၄ နာရီ ရောင်းသည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Lailun January 11, 2013 - 9:53 am	Okay. I will stop by tomorrow. Can you tell Thein Sein to meet me there? I want Corona with salt and lime. That’s it.
Reply	တခြားဖတ်စရာများ သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၄)